Faminaniana Gartner momba ny teknolojia 10 ambony ho an'ny taona 2011 | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 9, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mamaky mahaliana Ny faminanian'i Gartner momba ny teknolojia 10 ambony ho an'ny 2011… Ary ahoana ny fiantraikan'ny vinavina rehetra eo amin'ny marketing nomerika. Na ny fandrosoana amin'ny fitehirizana sy ny fitaovana aza dia misy fiantraikany amin'ny fahaizan'ny orinasa mifampiresaka na mizara vaovao amin'ny mpanjifa sy ny vinavina haingana sy mahomby kokoa.
Teknolo ambony folo ho an'ny 2011
Cloud computing - Misy ny serivisy momba ny computing cloud, misimisy kokoa, hatrany amin'ny daholobe misokatra ka hatramin'ny tsy mihidy. Ny telo taona ho avy dia hahita ny fanaterana karazana fomba fanompoana rahona izay latsaka eo anelanelan'ny roa tonta ireo. Ny mpivarotra dia hanolotra fampiharana rahona tsy miankina fonosana izay manome ny teknolojia serivisy ho an'ny daholobe ho an'ny mpivarotra (rindrambaiko sy / na fitaovana) sy fomba fiasa (izany hoe fomba fanao tsara indrindra hananganana sy hitantanana ny serivisy) amin'ny endrika azo ampiharina ao anatin'ny orinasan'ny mpanjifa. Betsaka koa no hanolotra serivisy fitantanana hitantanana lavitra ny fampiharana ny rahona. Manantena i Gartner fa hisy orinasam-pifandraisana mavitrika apetraka amin'ny taona 2012 ireo orinasa lehibe tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra sy fitantanana rahona mitohy.
Fampitaovana finday sy tabilao haino aman-jery - Nanombatombana i Gartner fa amin'ny faran'ny taona 2010, olona 1.2 miliara no hitondra finday afaka manan-karena amin'ny varotra finday, manome tontolo iainana mety amin'ny fampifangaroana ny fivezivezena sy ny Internet. Ny fitaovana finday dia lasa solosaina amin'ny azy manokana, miaraka amin'ny fahaizan'ny fikarakarana sy ny bandwidth. Efa an-jatony ny rindranasa ho an'ny sehatra toa ny Apple iPhone, na eo aza ny tsena voafetra (ho an'ny sehatra iray ihany) ary mila kaody tsy manam-paharoa.
Ny kalitaon'ny fanandramana fampiharana amin'ireo fitaovana ireo, izay afaka mampihatra ny toerana, ny fivezivezena ary ny toe-javatra hafa amin'ny fitondran-tenany, dia mitarika ny mpanjifa hifanerasera amin'ireo orinasa indrindra amin'ny alàlan'ny finday. Izany dia nanjary hazakazaka iray handroahana ny fampiharana ho fitaovana fifaninanana hanatsarana ny fifandraisana ary hahazo tombony amin'ireo mpifaninana izay mifototra amin'ny navigateur fotsiny.
Fifandraisana ara-tsosialy sy fiaraha-miasa - Ny media sosialy dia azo zaraina ho: (1) Tambajotra sosialy — vokatra fitantanana profil profil sosialy, toa ny MySpace, Facebook, LinkedIn ary Friendster ary koa ny teknolojia fandalinana tambajotra sosialy (SNA) izay mampiasa algorithma hahafantarana sy hampiasana ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny fahitana ny olona sy ny fahaizana. (2) Fiaraha-miasa ara-tsosialy —teknolojia, toa wiki, bilaogy, fandefasan-kafatra eo no ho eo, birao iaraha-miasa ary fiaraha-mikorana. (3) Famoahana ara-tsosialy —teknolojia manampy ireo vondrom-piarahamonina amin'ny fanangonana ny atiny tsirairay ho ao anaty trano fitahirizana votoaty azo ampiasaina sy azon'ny fiaraha-monina toa an'i Youtube sy flickr. (4) Fanamarihana ara-tsosialy - fahazoana hevitra sy hevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonina momba ny entana manokana hita maso amin'ny Youtube, flickr, Digg, Del.icio.us, ary Amazon. Naminany i Gartner fa amin'ny 2016, ny haitao sosialy dia hampidirina miaraka amin'ny ankamaroan'ny rindranasan'ny orinasa. Ny orinasa dia tokony hampiaraka ny CRM ara-tsosialy, ny fifandraisana anatiny sy ny fiaraha-miasa ary ny fandraisana andraikitra amin'ny tranonkala sosialy ho tetikady mifandrindra.
Video - Ny video dia tsy endrika haino aman-jery vaovao, fa ny fampiasana azy ho karazana haino aman-jery mahazatra ampiasaina amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny media dia mihanaka haingana. Ny fironana teknolojia amin'ny fakantsary nomerika, ny elektronika ho an'ny mpanjifa, ny tranonkala, ny lozisialy sosialy, ny serasera miray, ny fahitalavitra an-tserasera sy ny fahitalavitra mifototra amin'ny Internet sy ny informatika dia tonga amin'ny teboka fitsikerana izay mitondra ny horonantsary ho eo amin'ny sehatra mahazatra. Nandritra ny telo taona ho avy dia nino i Gartner fa ho lasa karazana atiny mahazatra sy maodelim-pifandraisana ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa ny horonan-tsary, ary amin'ny 2013, maherin'ny 25 isan-jaton'ny atiny hitan'ny mpiasa ao anatin'ny iray andro no hanjakan'ny sary, ny horonan-tsary na ny audio.
Analytics amin'ny Generation manaraka - Ny fampitomboana ny fahaizan'ny compute amin'ny alàlan'ny finday miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana dia ahafahana miova amin'ny fomba anohanan'ny orinasa ny fanapahan-kevitry ny asa. Manjary azo atao ny mihazakazaka simulateur na modely haminany ny ho aviny, fa tsy hanome tahiry tsotra fotsiny momba ny fifandraisana taloha, ary hanao ireo faminaniana ireo amin'ny fotoana tena izy hanohanana ny asan'ny orinasa tsirairay. Na dia mety mitaky fanovana lehibe aza izany eo amin'ny fotodrafitrasa misy eo amin'ny sehatry ny asa sy ny sehatry ny asa aman-draharaha, dia misy ny mety hisokatra fanatsarana lehibe eo amin'ny valin'ny orinasa sy ny taham-pahombiazana hafa.
Fanadihadiana ara-tsosialy - Sosialy Analytics mamaritra ny fizotry ny fandrefesana, ny famakafakana ary ny fandikana ny valin'ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny olona, ​​ny lohahevitra ary ny hevitra. Ireo fifandraisana ireo dia mety hitranga amin'ny rindranasa rindrambaiko sosialy ampiasaina eo amin'ny toeram-piasana, amin'ny vondrom-piarahamonina miatrika anatiny na ivelany na amin'ny tranonkala sosialy. Social Analytics dia fehezan-teny elo izay misy teknika famakafakana marobe toy ny fanivanana ara-tsosialy, famakafakana ny tambajotra sosialy, fanadihadiana ny sentiment ary media-sosialy Analytics. Fitaovana fandinihana ny tambajotra sosialy dia ilaina amin'ny fandinihana ny firafitry ny fiaraha-monina sy ny fifampiankinan-doha ary koa ny lamin'ny asan'ny olona, ​​vondrona na fikambanana. Ny famakafakana ny tambajotra sosialy dia mitaky fanangonana angona avy amin'ny loharano maro, famantarana ny fifandraisana ary fanombanana ny fiatraikany, ny kalitao na ny fahombiazan'ny fifandraisana.
Computing-Aware Computing - Ny informatika dia mifantoka amin'ny fotokevitra momba ny fampiasana fampahalalana momba ny faran'ny mpampiasa na ny tontolon'ny zavatra, ny fifandraisana ary ny safidiny mba hanatsarana ny kalitaon'ny fifampiraharahana amin'ilay mpampiasa farany. Ny mpampiasa farany dia mety ho mpanjifa, mpiara-miasa na mpiasa. Rafitra iray mahafantatra ny zava-misy arakaraka ny zava-misy, dia miandrandra ny filan'ny mpampiasa ary manolotra ny atiny, vokatra na serivisy sahaza azy indrindra. Naminany i Gartner fa amin'ny taona 2013, mihoatra ny antsasaky ny orinasa Fortune 500 no hanana tetikady momba ny informatika ary amin'ny 2016, ny ampahatelon'ny varotra mpanjifa manerantany dia hifototra amin'ny fahatsiarovan-tena.
Memory Memory Class - Gartner dia mahita fampiasana fahatsiarovan-tena amin'ny flash amin'ny fitaovan'ny mpanjifa, fitaovana fialamboly ary rafitra IT hafa tafiditra. Manolotra sosona vaovao ihany koa ny hierarchy fitehirizana ao anaty lozisialy sy solo-sainan'ny mpanjifa izay manana tombony lehibe - habaka, hafanana, fampisehoana ary fahasiahana eo amin'izy ireo. Tsy toy ny RAM, ny fahatsiarovana lehibe indrindra amin'ny mpizara sy PC, maharitra ny fitadidiana flash na dia esorina aza ny herinaratra. Amin'izany fomba izany dia toa sahala amin'ireo kapila kapila misy ny fampahalalana napetraka ary tsy maintsy tafavoaka hatrany amin'ny fidinan'ny herinaratra sy ny reboot. Raha jerena ny vidin'ny vidiny, ny fananganana kapila kapila fanjakana mivaingana avy hatrany amin'ny tselatra dia hamehy izany habaka sarobidy izany amin'ny data rehetra ao anaty rakitra na boky iray manontolo, raha misy sosona vaovao miresaka mazava tsara, tsy ampahany amin'ny rafitry ny rakitra, dia mamela ny fametrahana azy irery ihany singa fampahalalana avo lenta izay mila miaina ny fifangaroan'ny fahombiazana sy ny fikirizanana azo alaina amin'ny fahatsiarovana tselatra.
Computing rehetra manerana an'izao tontolo izao - Ny sanganasan'i Mark Weiser sy mpikaroka hafa ao amin'ny PARC an'i Xerox dia manisy sarina ny onjam-pehezan-kevitry ny computing fahatelo izay ampidirina am-pahibemaso amin'ny solosaina. Rehefa mihabetsaka ny solosaina ary omena ny zavatra ilaina isan'andro ny mifandray amin'ny tag RFID sy ny mpandimby azy, ny tambajotra dia hanatona sy hihoatra ny refy izay azo tantanana amin'ny fomba nentim-paharazana. Izany dia mitarika amin'ny fironana manan-danja amin'ny fampandehanana ireo rafitra informatika ho lasa teknolojia miasa, na natao ho teknolojia mampitony na voafehy mazava tsara ary tafiditra ao anaty IT. Ho fanampin'izany, manome torolàlana lehibe ho antsika ny amin'izay antenaina amin'ny fiparitahan'ny fitaovana manokana, ny vokatry ny fividianana mpanjifa amin'ny fanapahan-kevitry ny IT, ary ny fahaiza-manao ilaina izay atosiky ny tsindry amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana haingana amin'ny isan'ny solosaina ho an'ny olona tsirairay.
Fotodrafitrasa sy solosaina miorina amin'ny lamba - Solosaina miorina amin'ny lamba ny solosaina mifototra amin'ny lamba izay ny rafitra iray dia azo zohina amin'ny modely fanakan-trano mitokana mifangaro amin'ny lamba na backplane niova. Amin'ny endriny ifotony, ny solosaina miorina amin'ny lamba dia misy fakan-tsarimihetsika, fahatsiarovana, I / O ary ireo modely offload (GPU, NPU, sns.) Izay mifandray amin'ny fifandraisana mifamadika ary indrindra, ilay rindrambaiko takiana amin'ny fikirakirana sy fitantanana ny rafitra vokatr'izany. Ny maodelin'ny fotodrafitrasa mifototra amin'ny lamba (FBI) dia mamaha loharanon-karena ara-batana - cores an'ny processeur, fantsom-pifandraisana ary rohy sy fitehirizana - ho loharanom-pahalalana izay tantanan'ny Fabric Resource Pool Manager (FRPM), fampiasa amin'ny lozisialy. Ny FRPM indray dia tarihin'ny mpiorina lozisialy Governemanta Real Time Infrastructure (RTI). Ny FBI dia azo omena mpivarotra tokana na vondron'ireo mpivarotra miara-miasa akaiky, na avy amin'ny mpampiditra - anatiny na ivelany.
Io no Zeitgeista mahafinaritra indrindra amin'ny taona